Boqorada Denmark Margrethe Alexandrine, ayaa shacabka Denmark kala hadashey cudurka halista ah Coronavirus | Sahan TV
Boqorada Denmark oo la hadashey dadka Denmark
Boqorada Denmark Margereto ayaa caawa oo bishu ay tahay 17-03-2020 ka soo muuqatay TV2.
Boqorada ayaa ugu horeyntii waxay u tacsiyeysay dadkii u dhintay cudurka Coronavirus. Waxayna sheegtay in dadka Denmark loo baahan yahay inay u hogaansamaan talooyinka dawlada iyo amaradeeda, waxayna si gaar ah u dhaleecaysey dadka sameysanaya xafladaha kuwaasoo ay dad badani isugu imaanayaan khatarteedana ay leedahay.
Boqoradu waxay iyagana ay si adag ula hadashey dadka dhallinyarada ah oo iyagu aananba u hogaansamin amarada dawlada si loo xakameeyo cudurka Coronavirus.
Boqoradu waxay sheegtay in waqti adag lagu jiro, loona baahanyahay in gacmaha laysqabsado si wadajir ahna la isku caawiyo. Waxayna si gaar ah ugu mahadcelisey Takhaatiirta, Kalkaaliyaasha caafimaadka, Boliiska, Darawalada iyo cidksta oo garab u ah, sidii shaqooyinka Denmark u socon la hayeen.